नारीलाई कसको डर ? | Freeing My Mind
नारीलाई कसको डर ?
के मलाई भूतसँग डर लागेकोहो ? बाघ-भालु चोर-डाँकासँग डर लागेको हो ? होइन मेरो मनले जवाफ दियो । यी कुनै पनि कारण ‘प्रमुख’ होइनन् । तर मेरो -सिङ्गो नारी वर्गको) डरको प्रमुख कारण एउटै थियो, त्यो हो पुरुष ! सिर्फ पुरुष !!
म यो वर्षको दसंै मेरो जन्मभूमि ताप्लेजुङमा मनाउने सुरमा थिएँ । मनमा बाल्यकालका स्मृतिहरूमा बिलाउँदै, आमा-बुबा, साथी-भाइ, गाउँघरका हरिया डाँडा, पाखा र पखेरा सम्झदै टिकट काउन्टरतिर निस्किएँ । दिवा सेवाको टिकट लिने सुरमा थिएँ । टिकट सिद्धिएको जवाफ दिए । रातिको टिकट किन्ने कि नकिन्ने ? दोधारमा परेँ । अन्त्यमा गाउँतिर र्फकने दह्रो साथी नभेटी रातिको टिकट नकिन्ने निधो गरी फर्किएँ । घर पुग्दा साथी प्रकाश मलाई नै पर्खेर बसेका रहेछन् । मैले उनलाई सोधेँ ‘प्रकाश’ दसंैमा गाउँतिर फिर्ने कोही मानिस तिमीले बुझेका छैनौ ? हेरन दिवा सेवाको टिकट सिद्धिसकेछ ।
के मलाई भूतसँग डर लागेकोहो ? बाघ-भालु चोर-डाँकासँग डर लागेको हो ? होइन मेरो मनले जवाफ दियो । यी कुनै पनि कारण ‘प्रमुख’ होइनन् । तर मेरो -सिङ्गो नारी वर्गको) डरको प्रमुख कारण एउटै थियो, त्यो हो पुरुष ! सिर्फ पुरुष !! अथवा मेरो -नारीको) अस्मिता !!!
अँध्यारोको सहारा लिएर नारी अस्मिताको शोषण गर्न हरतरहले प्रयत्नरत देखिन्छन् । यही कारण म -सिङ्गो नारी वर्ग) अँध्यारोसँग डराउँछु । त्यसैले रातिको यात्राका लागि दह्रो साथी खोजिरहेकी छु । त्यस्तै एक रात रत्नपार्कमा बिताउने प्रकाशको चुनौती स्वीकार गर्न सकिरहेकी छैन ।
वास्तवमा महिला र पुरुष सृष्टिका समान उपज हुन् । तथापि महिलालाई प्रकृतिले विशेष दायित्वहरू सुम्पियो । जस्तो महिलाको मात्र महिनाबारी हुनुपर्ने, गर्भधारण गर्नुपर्ने, संवेदनशील अंङ्गहरू जसको साँझ, बिहान, भीडभाड, हरपल संरक्षण गर्नुपर्ने । यदि महिला अस्मिता लुट्न पुरुष विजयी भइहाले समाजमा महिलाकै मात्र-विशेषगरी) इज्जत जाने, मुखै देखाउन नहुने गरी समाजले कलंकित बनाइदिने । उनको परिवारसमेतलाई समाजमा दुर्गन्धित बनाइदिने । त्यस घरका छोरीचेलीको विवाह गर्न समाजले इन्कार गर्नेजस्ता सन्ताप नै सन्ताप महिलाले मात्र भोग्नुपर्ने तर पुरुष भने धेरैजसो सजायको भागी नै नहुने । भइहाले पनि बच्चाको खेलाचीझैं दुई-चार दिनमा नै कसै न कसैको फोर्स लगाएर सजाय मुक्त हुने जस्ता वास्तविकताले गर्दा प्रकृतिलाई नै चुनौती दिँदै महिला अस्मितालाई जिस्क्याउन र आतंकित तुल्याउन सदा पुरुष -जो यस्तो कलंकित सोचको छ) तत्पर रहने धु्रवसत्य मेरो सामु आइपुग्यो । यस्तै पुरुष आतंक -जो यस्तो प्रकृतिको छ) को कारण आज हामं्रो समाजले महिलाविरुद्ध हिंसा, हत्या, आतंक एवं बलात्कारजस्ता जघन्य अपराधका शृङ्खला बेहोरिरहेको निष्कर्ष मेरो मनले निकाल्यो ।
भनिन्छ नारी समाजको शीतल छहारी अनि सुखद् संयोग हुन् । नारी एक भएर पनि अनेक रूप धारण गरी संसारमा माया बाँडिरहेकी हुन्छिन् । कसैकी आमा बनेर मातृत्व प्रदान गर्छिन् । कसैकी प्रेमिका बनेर कसैकी पत्नी बनेर, चोखो माया दिइरहेकी हुन्छिन् ।
कसैकी दिदी-बहिनी, छोरी बनेर अपार माया बाँडिरहेकी हुन्छिन् । त्यस्तै कसैकी बुहारी बनेर कर्तव्य पालन गरिरहेकी हुन्छिन् तर त्यही नारीको महिमा नबुझ्ने पुरुष भनाउँदा केही अजिंगर नारीको अस्मिता भंग गर्न आतुर देखिन्छन् । अँध्यारोको सहारा लिएर नारी अस्मिताको शोषण गर्न हरतरहले प्रयत्नरत देखिन्छन् । यही कारण म -सिङ्गो नारी वर्ग) अँध्यारोसँग डराउँछु । त्यसैले रातिको यात्राका लागि दह्रो साथी खोजिरहेकी छु । त्यस्तै एक रात रत्नपार्कमा बिताउने प्रकाशको चुनौती स्वीकार गर्न सकिरहेकी छैन । यदि हरेक पुरुष वर्ग इमानदार, महात्मा भइदिने हो भने, हरेक पुरुषले नारीलाई आफ्नो आमा, दिदी, बहिनी, छोरी समान सम्भिmदिने हो भने एक रात के सयौं रात बाहिर बाहिरै बिताउन सकिन्छ । पुरुषहरूको आँखामा आँखा जुधाएर टक्कर लिई अगाडि बढ्दै लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ । तर त्यसका लागि पुरुष एवं समाजले नारी वर्गलाई हेर्ने दृष्टिकोण र गर्ने व्यवहारमा परिवर्तन हुन नितान्त जरुरी छ । त्यसको साथै कानुनी दृष्टिकोणले हेर्दा मुलुकी ऐन जबरजस्ती करणी र आसय करणीका महलमा भएका व्यवस्था अपर्याप्त देखिन्छन् भने यही अपराधसँग सम्बन्धित छुट्टै कानुनको अभाव छ । त्योभन्दा बढी दुःखको कुरा त ती महलमा उल्लेखित कानुनको कार्यान्वयनसमेत निष्पक्ष रूपमा भइरहेको पाइँदैन । समाजमा कलंकित हुने डरले गर्दा जे जति यस्ता घटना भएका छन् तीमध्ये केहीमात्र प्रकाशमा आउँछन् । यसरी आफ्नो अस्मितालाई तिलाञ्जली दिँदै हिम्मतका साथ प्रकाशमा ल्याइएका मुद्दासमेत सर्वोच्च अदालतसम्म पुगे पनि प्रमाणको प्रचुरताको अभाव देखाई प्रतिवादीकै पक्षमा फैसला भएका दुःखद घटना प्रशस्त रहेका छन् । जसको परिणामस्वरूप राक्षसरूपी पुरुष -जो त्यो स्वभावको छ) लाई पुनः अपराध गर्न थप हौसला प्रदान गरेको देखिन्छ ।
निष्कर्षमा भन्नुपर्दा अस्मिता लुटिएकी चेली हरेक पल, क्षण-क्षणमा मरिरहेका हुन्छन् । उनका लागि सबैभन्दा ठूलो प्राप्ति अपराधीलाई सजाय दिलाउनु हो । त्यसैले यस्तो अपराधलाई रोक्न कडाभन्दा कडा सजायको कानुनी व्यवस्था एवं कार्यान्वयन गर्नेतर्फ राज्यले गम्भीर हुनैपर्छ । पीडित व्यक्तिलाई कम्तीमा पनि गाँस, बास, कपास, सीपमूलक तालिम, योग्यताअनुसारको उचित अवसरको व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्छ । साथै हामी समाजका हरेक मानवप्राणीले संङ्कीर्ण सोच नातावाद, पैसावाद त्यागी अपराधीलाई कडा सजाय दिलाउन पहल गर्नुपर्छ । पीडित महिलाले समाजमा स-सम्मान बाँच्न सक्ने परिस्थिति समाजले तयार गर्नुपर्छ । राज्यले दोषीलाई यस्तो कडा सजायको व्यवस्था गर्नुपर्छ कि त्यो सजाय भोग्नेले त के देख्ने र सुन्नेले समेत त्यस्तो भुल गर्ने हिम्मत नगरोस् । जब समाजले यति कुरा प्राप्ति गर्छ तब म -सिङ्गो नारीवर्ग) एक्लै यात्रा गर्न तथा आवश्यक परेमा एक रात त के धेरै रात पनि रन्नपार्कको पेटीमा बिताइदिन सक्ने छु ।
–लेखिका आम सरोकार सेवा समाज नेपालकी उपाध्यक्ष, समाज शास्त्री तथा कानुनको विद्यार्थी हुन् ।)
Posted in कान्तिपुर and tagged fear, Nepal, Women on October 25, 2006 by Darshan. 1 Comment
← ZPT writing….
City of lights: an evening out in New Road →
‘gumdai firdai rumjha tar’, i am back here after long long time, last time i visited your blog, you were ‘shakespear in love’ tangled up with your smitten feelings and ‘want to be writer’ zeal write ups.
this time it’s ‘gloria steinem in love’, but always brings smile on my face to read your blog.